Stallman miaina, miaina ary miloko feno | Avy amin'ny Linux
Stallman velona, ​​miaina ary miloko feno
tsy tia | | GNU / Linux
Tsy tsiambaratelo ho an'iza na iza fa ideolojika tanteraka ny asan'i Richard Stallman ankehitriny. Ny fandraisany anjara amin'ny rindrambaiko maimaimpoana dia lasa ilay fisondrotana an'ny rindrambaiko maimaim-poana. Eny, nanatrika ny iray tamin'ireo lahateninao aho ary tsy maintsy milaza aho fa tsy nisy afa-tsy izay nandrasako. Na ho an'ny tsara na ho amin'ny ratsy. Sarotra ny fahaizana manao traikefa toy izany ary tsy maintsy hazavaiko fa ireo no hevitro manokana ary maneho ny fahitako manokana an'io raharaha io.
1 Ny toe-javatra
2 Zon'ny mpamorona vs. fiaraha-monina
3 Ny fifanolanana
Monina ao amin'ny tanàna izay fijanonana farany nataon'i Stallman any Mexico aho. Ny reniny dia nifantoka tamin'ny renivohitry ny firenena, fa samy tany Tijuana sy Puebla dia sambatra izahay nahazo iray. Raha ho ahy dia nomena ny kaonferansa Fihaonambem-pirenena momba ny lozisialy maimaim-poana, kongresy nahitana kaonferansa ifotony, atrikasa ary hetsika hafa. Ny hetsika iray manontolo dia natao tao amin'ny ivon-toeran'ny University Autonomous Popular an'ny State of Puebla, andrim-panjakana tsy miankina amin'ny fampianarana ambony.
Alarobia maraina tamin'izay. Stallman no hiandraikitra ny fanokafana ny hetsika, ny fampisehoana nataony no voalohany. Tao no nanaovako ny tsy ampoizina voalohany ho an'ny maro fa natokana ho ahy ilay hetsika: ny mpikarakara ihany no nampiasa rindrambaiko maimaimpoana. Tsy sahy nanaiky ny zava-misy aho fa misy olona marobe manatrika fivoriamben'ny Bokin'i Môrmôna rain'ny rindrambaiko maimaimpoana miaraka amin'ny masinina mameno Windows sy iPads na aiza na aiza. Tamin'ny kaonferansa dia tsy nahita afa-tsy masinina iray mihazakazaka Lubuntu aho.
Nipetraka tamin'ny laharana faharoa aho. Tsy mbola tiako loatra ny ho lavitra alohan'ireny karazana toeram-pivoriana ireny, saingy mieritreritra aho fa fotoana mety izao hanaovana ankanavaka. Na eo aza izany, sahirako dia somary sarotra ny naka sary ilaina, na dia noho ny tsy fahampian'ny fahalalan'ny fakantsary nomerika mijaly ahy indrindra aza izany. Na izany na tsy izany, teo aho ary te handre izay nolazain'i Richard Stallman.
Nipoitra tampoka. Toy ny hoe maka sary an-tsaina izany foana ny olona. Akanjo mena sy pataloha misy loko volontany hafahafa ho ahy. Omeo izahay autocollant, izay resahinay eto ho toy ny sticker, miaraka amina motifs avy amin'ny GNU, ny FSF ary ny fampielezan-kevitra manohitra ny DRM. Namidiny taminay ireo lahatsoratra ho tombontsoan'ny fikambanana tarihiny. Nividy marika kely aho, satria tsy tiako ireo lehibe, raha ny marina.
Tamin'ity fotoana ity dia nahazo ny fahagagana faharoa tamin'ny maraina aho. Nieritreritra an-tsary an'i Stallman foana aho tamin'ny toetrany mahery setra kokoa, saingy olona tsara tarehy izy ary indraindray tsy mety. Indrindra amin'ny fanitsiana nomena ny mpikarakara rehefa nanao ny tsy mety tamin'ny fiantsoana izy tompony amin'ny inona privative. Ary natomboka ny kaonferansa.
Zon'ny mpamorona vs. fiaraha-monina
Fanararaotana ny fahatsorako, ny lohateny dia tsy nanafika teboka izay tsy fantatra ny hevitr'i Stallman, na dia naneho lohahevitra mahaliana toy ny ankivy an'i Harry Potter na ny heviny momba ny fanaparitahana ny atiny. Azoko ny fahitanao ny fisarahan'ny sanganasa sy ny fahazoan-dàlana tokony hanaraka, saingy tsy manaiky aho. Fa aleo tsy mandeha mialoha ny tenantsika isika.
Ny fanontaniana dia ireo mahazatra izay antenainao amin'ny hetsika toa izao. Ary ny valiny koa. Ka zavatra mahazatra azy io, izay ahafahako manavotra fanontaniana efatra napetraky ny besinimaro, izay hitako fa mahaliana; tsy mikapoka tanjona kendrena azo iadian-kevitra: 1
Misy zavatra mbola tsy azontsika atao amin'ny rindrambaiko maimaimpoana. Inona no azontsika atao hanatsarana azy?
Mila fahafoizan-tena ny fahalalahana.
Noteren'izy ireo tao amin'ny Benemérita Universidad Autónoma de Puebla izahay hampiasa rindrambaiko manana. Inona no hataontsika?
Mila mikarakara fihetsiketsehana ianao. (Ity misy adihevitra kely momba inona nanery azy ireo hampiasa, ny foto-kevitry ny ny rahona ary ireo zavatra ireo)
Miresaka momba ireo sanganasa ireo izy, nefa tsy miresaka momba ny zava-mahadomelina ...
Maninona no somary hafa ny fanafody, arovan'ny patanty. Tsy azo arovana izany satria ny fanehoana hevitra no azo arovana.
Rafitra inona araka ny eritreritrao no tokony hatao ny microtransactions miresaka momba ny fandraisana anjara an-tsitrapo ho an'ny artista?
Tsy microtransactions izy ireo, lanja iray2 vola be io. (Niresaka momba ny bitcoin ny mpanontany ary nilaza fa tsy fantany ny fomba fiasan'izy ireo)
Eny, tsy azoko natao ny nanontany zavatra hafa taminy. Ka nanontaniako azy ny momba ny videogames ho toy ny asa tsy azo ampiharina ary ny antony tokony hamoahana ilay zavakanto miaraka amin'izy ireo, mamoaka ireo loharano misy ao. Milaza izany fa tsy ilaina izany, fa mety tsara. Nanontaniako azy ihany koa ny momba ny fampiasany ny lisansa Creative Commons No Derivatives noho ny heviny. Nilaza izy fa tsara ny fizarana sanganasa, fa ny fanovana zavatra dia lainga. Tsy afaka ny tsy hiombon-kevitra bebe kokoa aho.
Ity misy olana kely. Stallman dia manana olana amin'ny fihainoana, izay nampitandrina antsika ny amin'ny tenany. Nangataka taminay foana izy mba hanisy marika ny feon'ireo consonants, hiteny miadana kokoa hatrany. Hanombohana azy, ny haavo Espaniôla azony dia hajaina, mitantana fanaovana kaonferansa mampiasa indroa fotsiny ny fanampian'ny olona iray handika teny iray izay nanalavitra azy tamin'ny fiteninay. Tena nahaliana ahy izany ary misaotra anao nanokana fotoana hianarana Espaniola mendrika.
Saingy, nanasarotra ny fifandraisana izany. Tsy hevitra tsara ny miady hevitra toy izao, indrindra raha maika antsika. Na izany na tsy izany dia mamela antsika hanana fiheverana poakaty ireo fanontaniana. Ohatra: Adinon'i Stallman fa raha tsy mahavita mandoa an-tsitrapo ny atiny ny mahantra dia tsy afaka mandray fitaovana amin'izany koa izy ireo. Ny tiako holazaina dia hoe fahantrana no resahina. Mbola misy ny olona noana eto ary tsy afaka mieritreritra mividy zavatra toa izany. Raha ny fahitako azy dia lesoka lehibe amin'ny adihevitrao io, na dia mihevitra aho fa famintinana hevitra lehibe kokoa izany. Ny bokotra fanamarinana lazainao dia misy amin'ny fomba sasany ary tsy hoe hoe tafita loatra ny milaza azy.
Toa tsy misy dikany amiko ny fizarana ireo sanganasa. Manazava aho. Stallman dia miresaka momba ny fisarahana miasa amin'ny sanda azo ampiharina, kanto y hevitra. Afaka nametraka ohatra telo isika: ny lozisialy maimaim-poana, ny sary hosodoko ary ny hevitry ny lahatsoratra; tsirairay avy. Ny telo dia fanehoana kolontsaina ary amiko dia tokony hafahana ireo telo ireo.
Tsy maimaimpoana ny fahazoan-dàlana CC-ND. Ny fiarovana ny hevitra amin'izany dia tsy kolontsaina malalaka. Ny fizarana dia tsy mahavaha zavatra, satria manakana ny fampiasana maro hafa ho azy io. Noraisiko tsara ny lahateny famaranana farany ny hetsika, nomen'i Amboadia Gunnar; avy aiza no ahafahako mamoaka hevitra manan-danja: Ny kaody dia endrika fanehoana famoronana. Miresaka ny rindrambaiko maimaimpoana ho toy ny fanehoana kolontsaina izy ary mahita ny tompony ho toy ny fanararaotana ara-tantara ny antony nanakatohany ireo hevitra. Ny adihevitra manimba voalohany amin'ny alàlan'ny rindrambaiko maimaimpoana, na dia i Wolf aza dia tena tsara kokoa nasehony manokana fa tsy izaho, izay mandinika fotsiny ny fiantraikany.
Ankehitriny, ny fampiasana an'ity adihevitra ity (na araka ny fahazoako azy) ny rindrambaiko dia fanehoana iray fotsiny ny kolotsaina, ny kolontsaina malalaka manokana. Ny lisansa CC-BY dia efa miaro ny zon'ny mpamorona amin'ny sanganasa ara-moraly, koa raha nisy naka ny lahatsoratro izay ilazako fa tiako ny masoandro sy ny andro mafana; navoaka tamin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana maimaim-poana amin'ny CC-BY (na miaraka amin'ny CC-BY-SA; copyleft; satria mifanohitra tsy misy dikany ny hevitr'i Richard Stallman) azoko atao ny manambara fanendrikendrehana raha misy manova azy mba hiseho fa tiako ny orana sy ny lolofotsy.
Miaraka amin'ny fifanolanana farany teo amin'ny kinova 4.0 an'ny Creative Commons, nisy ny fifanolanana teo amin'ny fanjavonan'ny fehintsoratra NC sy ND, satria ny asa narovan'izy ireo dia tsy afaka maimaimpoana. (Fomba ahazoanao manome alalana an'ity bilaogy ity, Non-Commercial; izay mety ho fananana ara-kolontsaina maimaimpoana amin'ny zony raha tianao). Fahadisoako ny tsy nanontany ny heviny momba an'io, saingy heveriko fa azo vinavinaina ny valiny. Mankany amin'ny fizarana izany Verbatim toy ny nataony taloha. Mazava ho azy, mandroso valiny iray izay mety ho hafa aho ary amin'ny toe-javatra tsara indrindra, dia manjary malefaka kokoa. Manomboka eto dia miala tsiny aho raha misy izany.
Hetsika mahaliana io. Met Perseus mivantana, naka atrikasa Ruby niaraka taminy, nianatra Blender sasany, nanana sticker ary maro hafa. Nandoa 300 peso nandritra ny telo andro aho ary na dia tsy naka ny atrikasa tadiaviko rehetra aza aho3 Tsapako fa tena mendrika izany. Tsy afaka milaza aho fa nanova ny fiainako ny fahitana an'i Richard Stallman mivantana, fa lahateny nahafinaritra kosa izany: Iza no mividy ahy ity wildebeest mahafinaritra ity? Iza no mividy azy hanohizany hiaro ny fahafahany?
Ireo fanontaniana ireo dia tany am-boalohany no nanontany ireo mpanatrika ny hetsika. Ny valiny dia nomen'i Richard Stallman. Noho ny antony format ary tsy afaka manana firaketana azo itokisana momba izany aho dia mifikitra amin'ilay kinova voarakitra ao amin'ny fitadidiako sy ao amin'ireo naoty fohy nataoko. Andriamatoa Stallman, tsy mandainga aho na mamily ny hevitrao. Io dia azo porofoina mora foana ao aminao tranonkala manokana.
Peso meksikana (MXN). Mazava ho azy, tsy heverinay ho be dia be eto izany; saingy azo inoana fa manondro ny fahaizan'ny ampahany amin'ny vola elektronika. Toa Bitcoin no manohana hatramin'ny 8 zero aorian'ny vanim-potoana. Azafady mba ahitsiho aho raha diso aho.
Midika izany fa nanana zavatra tokony hatao koa aho. Ny fitetezana an'ity tanàna ity dia sarotra amin'ny fanamboarana be dia be.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Stallman velona, ​​miaina ary miloko feno
Zavatra kely roa tsy misy dikany. Toa tsy mandeha ny fanamarihana ambany pejy. Saingy tsara ihany ny endrik'izy ireo. Ary tsy miseho ny rohin'ny sary, izay eto
Ary tsy nandeha koa izany. Izay no ilaozako azy, ampy ny miady anio 😛
Ireo zavatra resahina dia toa olana amin'ny foto-kevitra, hijerena raha tonga any i elav na i Gaara. Mikasika ilay rohy dia nanamarina ny tantaran'ny kinova aho ary toa diso ny fampidiranao azy. Raha te-hametaka azy amin'ny hevitra ianao dia ampidiro ny tenako na ny admin voalohany nahita azy. 😛
Eny, eny, tsy maintsy mametraka ny tenantsika amin'izany isika, misy zavatra maro izay nipoitra izay tsy tsapantsika rehefa nanangana ny ekipa vaovao isika. 🙁
Zavatra madinidinika io, na izany aza. Tena tiako ity lohahevitra ity 😀
Tsy hita ireo sary.
Miombon-kevitra amin'i Stallman aho. Raha avelanao ny sanganasa derivative an'ny lahatsoratrao dia azon'izy ireo atao ny manova azy ireo mba hanodinkodinana ny hafatrao. Tsy noforonina omaly ny teny diso.
Ny fomba marina indrindra hanonona fehezanteny iray dia ny fandikana ireo teny marina.
Tsy afaka mampitovy lahatsoratra amin'ny rindrambaiko izahay. Raha te hanao asa mitovy amin'ny an'i Stallman ianao dia manan-jo hanao izany. Tsy mihidy ny lahatsoratra, vakiana ary loharanom-panahy ho an'ny hafa. Misy tantara an-tapitrisany maro izay mamerina ny hevitra efa tonta, ary tsy misy olona manana rantsan-tànana roa hiampanga ireo mpanoratra ho nanao piraty na nandika lisansa. Stallman dia manandrana misoroka ireo teny nolazaina fa tsy nosoratany. Mihoatra ny fiarovana ny lahatsoratra no tanjony mba hiarovana ny sonianao.
Eny, ny fandisoan-kevitra dia ho olana hatrany; Saingy ny fahazoan-dàlana malalaka dia efa mamaha ny olan'ny zon'olombelona. Tsy azoko antoka, fa ny ND kosa tsy mamela ny fandikana lahatsoratra raha tsy nahazo alalana mazava avy amin'ny mpanoratra ary omena fetra voafetra aho. Ampahany lehibe amin'ny kolontsaina ny referral.
Ny hevitry ny tena manokana momba ny zavatra "X" dia tsy dia misy ifandraisany. Stallman dia manandrana mandika ny asa sorany manan-danja amin'ny fiteny hafa. Azonao atao ny manoratra lahatsoratra amin'ny fiteninao izay mifandraika amin'ny zavatra nosoratan'i Stallman nefa tsy natahotra ny handika lisansa. Ny tokony hataonao mazava dia ny fandikanao an'izay nosoratan'i Stallman fa tsy ny tena nosoratany. Tsy afaka mandika lahatsoratra ianao ary manasonia azy amin'ny anaran'ny hafa raha tsy misy ny fanekeny. Na izany na tsy izany, tsy azoko an-tsaina i Stallman manameloka devoly mahantra izay te hanaparitaka ny hafany amin'ny fiteny hafa.
"Tsy afaka mandika lahatsoratra ianao ary manasonia azy amin'ny anaran'ny hafa raha tsy misy ny fanekeny"
Ny BY an'ny Creative Commons dia mikarakara an'io ary efa ampy izay.
Heveriko fa tsy azonao ny tiany holazaina. Tsy azonao atao ny mandika ny lahatsoratr'i Doe ary manasonia azy amin'ny anaran'i Doe raha tsy mahazo alalana aminao. Tsy ho faly aho raha misy mandika ny asa soratro amin'ny fomba ratsy amin'ny fametrahana ny anarako any amin'ny farany. Mety hanome fiheverana fa izaho no nanoratra ny fandikana. Ary raha miteny hoe "fandikana ny lahatsoratr'i Doe avy amin'i Mengano", farafaharatsiny mazava fa tsy ahy ilay izy fa ny soratra tany am-boalohany no voahodinkodina. Soso-kevitra ny hifampidinika foana amin'ny mpanoratra voalohany.
Fa izany indrindra no andraikitry ny andininy BY, izay ao anaty lisansa CC rehetra.
Attribution - Tsy maintsy ekenao ny isa azon'ny mpanoratra amin'ny alàlan'ny fomba namboarin'ny mpanoratra na ny nanome fahazoan-dàlana azy (fa tsy amin'ny fomba milaza fa manana ny fanohanan'izy ireo ianao na manohana ny fampiasanao ny asanao).
Ny fehezan-dalàna BY dia manery anao hanonona ny mpanoratra voalohany. Azoko atao ny mandika ny lahatsoratra diso tanteraka ary mitanisa ny mpanoratra tany am-boalohany (tsy mandika ny BY aho) tsy mangataka alalana. Izay no antony ilana ny DN, fehintsoratra manery ny lahatsoratra hizara tsy misy fanovana. Raha misy te handika na hampifanaraka lahatsoratra amin'ny DN dia tsy maintsy mangataka alalana amin'ny mpanoratra voalohany izy.
@diazepan, ny fanondroana dia tsy midika fotsiny hoe mametraka ny anaran'ny mpanoratra voalohany. Tsy azonao atao ny mampiasa ny asan'izy ireo hanomezam-boninahitra ny tenanao, ary tsy azonao atao ihany koa ny milaza fa manana ny fanohanany ianao… Fa raha adikao ara-bakiteny ilay asa, ampiana ny anaran'ny mpanoratra sy ny fahazoan-dàlana CC-BY tany am-boalohany, dia tsy mandika na inona na inona ianao (izay fantatro ny). Raha ny andininy faha-3b an'ny fahazoan-dàlana dia mila manondro fotsiny ianao fa dikanteny izany. Raha sendra diso ny fandikana azy io, hanimbaana ny mpanoratra, dia manitsakitsaka ny andalana 4c ianao fa tsy manonona na inona na inona momba ny lesoka "fortuitous". Tsy haiko raha mitantana fampahalalana hafa izay tsy fantatro ianao.
Misy pejin-tranonkala misy lahatsoratra CC-BY voadika (voatondro tsara) miaraka amin'ny fanehoan-kevitra avy amin'ny mpamaky izay mampifangaro ny mpanoratra tany am-boalohany amin'ny mpandika teny. Ny fahazoan-dàlana CC-BY dia mety tsara amin'ny wiki sy lahatsoratra tsy miankina manokana (raha ny fahitako azy).
Izao dia mametra izany ny fehezan-dalàna ND. Matetika ny olona mangataka alalana hanova ny sanganasa amin'ny CC-BY na SA, fa izany dia natao ho fahalalam-pomba fotsiny. Ny fanatanterahana izany noho ny adidy dia manasarotra zavatra, satria miseho ny fahasarotana amin'ny fifandraisana; lazao ny fahafatesan'ny mpanoratra.
Niresaka zavatra mahaliana i Wolf ary izany dia ny fotoana nifaranan'ny ND sy NC, ary rehefa lany daty dia lasa kolontsaina afaka.
Raha izany no izy, raha maty ny mpanoratra ny lahatsoratra DN, dia miandry taona vitsivitsy monja isika ary afaka miasa amin'ny fiavian'izy ireo.
Mampiasa CC-BY aho isaky ny afaka aho ary tsy misy zavatra hafa. Toy ny amin'ity lahatsoratra ity na amin'ny bilaogiko manokana, saingy miaraka amin'i CC-BY hatrany, mba hiantohana ny remix ary ny hafa raha indray andro manoratra na manao asa lehibe iray.
Ny olona iray manoratra sanganasa ary manaparitaka azy malalaka dia manome aingam-panahy ahy amin'ny fahatokisana. Amin'izao fotoana izao dia tsy dia sarotra loatra ny mifanerasera amin'ny mpanoratra. Raha manoratra boky momba ny KDE 4 SC ianao ary mila lahatsoratra voadika avy amin'i John Doe, ny fiandrasana azy ho faty dia tsy hevitra tsara, satria ho lany andro ilay boky torolalana. Ny DN efa lany daty dia tsy manamboatra be loatra. Heveriko fa ilaina ny manazava ny tetikasanao amin'ny mpanoratra ary miara-miasa amin'ny fampifanarahana raha azo atao. Ny DN dia tsy mahatonga ny mpanoratra ho fahavalon'ny kolontsaina afaka.
Raha manao "remix" an'ny mpanoratra maro ianao izay mamorona zava-baovao (tsy tapaka sy mametaka) dia ampy izay ny fametrahana ireo andinin-tsoratra masina. Ny fakana hevitra avy amin'ny tantara maro ary alefany ho tantara "remix" dia tsy heverina ho asa namboarina (tsy hatao hoe plagiarist ianao). Afaka manoratra zavatra mitovy amin'izany amin'ny fomba arivo ianao. Ny zava-dehibe momba ny CC-BY dia ny famakiana sy ny fizarana an-kalalahana ireo sanganasa nefa tsy manitsakitsaka ny zon'ny mpamorona, ny derivatives dia avo lenta ary mifandraika amin'ny mpanoratra ihany.
Lahatsoratra tena tsara, toa hoe avy am-pelatanan'ny mpanao gazety izany 😀
Lahatsoratra tsara. Nanatri-maso ny lahatenin'i Stallman aho tamin'ny taon-dasa (na ilay teo aloha? Tsy tadidiko tsara), rehefa tonga tany Arzantina tany FLISOL izy ary gaga ihany koa tamin'ny ambaratonga miteny Espaniola.
Nanantena ihany koa aho fa ho mafy toetra izy, saingy ny mifanohitra amin'izay no izy. Mikasika ny wildebeest dia fantatro fa manao izany amin'ny lahateny rehetra alehany izy, tao amin'ilay lahateny nandehanako dia nahatratra 120U $ D mora ny lavanty haha.
Eto dia nahatratra 550 MXN. Heveriko fa ny tahan'ny fifanakalozana dia manodidina ny 40 USD, izay mahatonga ahy hieritreritra fa mikorontana be eto amintsika
Nanatrika ny ENLI ihany koa aho ary arak'ireo fanontaniana lazainao dia mieritreritra aho fa misy ianao (manantena aho fa tsy diso aho), zavatra iray izay nahatonga ahy fahasoavana be dia be rehefa nilaza taminao izy mba hiteny miadana kokoa ary nataonao izany fa miadana be. Marina ny anao, misy ekipa maro manana rindrambaiko manana, fa antenaina aorian'ny hetsika dia hisy bebe kokoa amin'ny rindrambaiko maimaimpoana. Hevitra tsara dia tsara 🙂
Eny, nanao izany aho noho ny fahalalam-pomba. Mieritreritra aho fa mety nanafintohina olona iray, fa tena tiako ho azony ny fanontaniako. Na izany na tsy izany, hetsika nahafinaritra io. Ary nitafy volondavenona aho. Angamba izany dia hanome anao famantarana ampy. 😛
Tsy tadidiko ny ampahany momba ny fivarotana aminay ny sticker sticker wildebeest fa tadidiko fa nanao ny akanjo toy ny Santo izy niaraka tamin'ny Cylinder of the HDDs taloha napetraka teo an-dohany toa ireny no areola. Ireo sary izay nalaina niaraka taminay tao amin'ny ICU Tsy fantatro hoe aiza no azon'izy ireo satria vitsivitsy monja no hitako ary vao mainka nanaratsy izany dia mpianatra vitsivitsy monja no nivoaka.
Eto i Saint Ignucius dia tsy niseho taminay. Tsy haiko hoe nahoana.
Digital_CHE dia hoy izy:
Nahita an'i Richard Stallman aho tamin'ny Fifanarahana voalohany sy farany nataony tany Viedma, RioNegro, Arzantina ...
Ary hoy aho farany, satria ity rangahy ity, any Arzantina dia TSY MIVERINA, noho ny resaka SIBIOS ...
Nataoko sary an-tsary ny ankamaroan'ny fihaonambe ... Nolazaiko fa saika ny rehetra, satria lany ny baterin'ny fakantsarako ...
Amin'ny maha olona azy dia bandy tsotra izy. Tsy manana rivotra divo ...
Ankehitriny, amin'ny maha-mpanaparitaka rindrambaiko maimaim-poana azy dia zavatra Extremist izy io: tsy mahazaka ny lozisialy tsy miankina miara-monina am-pilaminana miaraka amin'ny Free Software.
Valiny amin'ny Digital_CHE
Qmmp: mpilalao audio maivana voasoratra ao amin'ny Qt
Winks Canonical amin'ny takelaka.